ညစ်ညမ်းကား များအသွင် ယူထားသည့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် ဖေ့ဘုတ် အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းကျော်ကို တိုက်ခိုက် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Tech News ညစ်ညမ်းကား များအသွင် ယူထားသည့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် ဖေ့ဘုတ် အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းကျော်ကို တိုက်ခိုက်
ညစ်ညမ်းကား များအသွင် ယူထားသည့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် ဖေ့ဘုတ် အသုံးပြုသူ တစ်သိန်းကျော်ကို တိုက်ခိုက်
Maung Pauk at 1:50:00 PM Tech News,
နယူးယောက် ။ ။ ပြီးခဲ့ သည့်နှစ်ရက် အတွင်းဖေ့ဘုတ် အသုံးပြုသူ ၁၁၀၀၀၀ကျော်ထက် မနည်းသည် အယောင်ဆောင်ဆော့ဝဲလ်ကို မသိရှိကြဘဲ အင်စတော လုပ်မိကြကြောင်း၊ယင်းဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတောလုပ်ခြင်းဖြင့် ညစ်ညမ်းကား အသွင်ဆောင် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်က ဝင်ရောက် သွားနိုင်ပြီး ဟတ်ကာများက သုံးစွဲ သူ၏ ကွန်ပြူတာကို ထိန်းချုပ် သွားနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း လုံခြုံရေး သုတေသန ပညာရှင် တစ်ဦး ကပြောသည်။
လူမှုမီဒီယာ အသုံးပြု သူများ သည် ညစ်ညမ်း ကားများ၊ ဓာတ်ပုံ များဖော်ပြ သည့် ပို့စ် များကို ကြည့်ရန် နှိပ်ကြရာတွင် ဗီဒီယို ကားများ အင်တာ နက်ပေါ်တွင် ကြည့်နိုင်သည့် Flash Player ကို update လုပ်ခိုင်းကြောင်း၊ ယင်းသို့update လုပ်ရန် အတွက် Flash Player ကို အင်စတော လုပ်ရာမှ တစ်ဆင့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် ဟတ်ကာ များက ဖန်တီး ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင် မိုဟာမတ် ဖာဂန်နီ ကပြောသည်။
"ဒီ ညစ်ညမ်းပို့ စ်ကို tags လုပ်ထားခံထား သူတွေ မှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက်နိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ့ပို့စ်ကို ဖွင့်ကြည့်တယ် ဆိုရင်ဖေ့ ဘုတ်သုံး စွဲသူက ညစ်ညမ်း ကား အစပိုင်းကို ကြည့်ရမှာပါ။ အဲဒီ ဇာတ်ကားက ခဏပြပြီး ရပ်သွား မှာဖြစ်ပြီး Flash Player ကိုအင်စတော လုပ်ခိုင်း မှာဖြစ်တယ်။ အင်စတော လုပ်မိတာနဲ့ဟတ်ကာတို့က သုံးစွဲ သူကို ထိန်းချုပ် သွားနိုင်ပါပြီ။"ဟု ဖာဂန်နီ ကပြောသည်။
ထိုသို့ အင်စတော လုပ်မိပြီးသည့် ကွန်ပျူတာတွင် သုံးစွဲသူ၏ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်တို့ ကို ဟတ်ကာက ထိန်းချုပ် သွားနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူ ပြုလုပ် သမျှကို တိတ်တ ဆိတ် လျှို့ဝှက် ကြည့်နေနိုင် မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းးက သတိပေးသည်။
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို “Magnet” နည်းပညာဟု ဖာဂန်နီက အမည်ပေးထားပြီး ယင်းဟတ်ကာလုပ် တိုက်ခိုက်မှုသည် ဖေ့ဘုတ်အသုံးပြုသူများကြား လျင်မြန်စွာ ပျံ့ နှံ့ နိုင်စွမ်းကြောင်း၊ ပို့ စ်တစ်ခုဖြင့် အနည်းဆုံး လူနှစ်ဆယ်ကို ပစ်မှတ်ထားနိုင်၍ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“Magnet” နည်း ပညာဖြင့် တိုက်ခိုက် ထားသည့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ် ပါဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတော လုပ်မိသူ များသည် ၁၁၀၀၀၀ ကျော်ထက် မနည်း ရှိခဲ့ သည်ဟု လည်း ဖာဂန်နီ ကပြောခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်ပေးမည့် ပို့ စ်များကို လူမှုမီဒီ ယာဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ရှင်းလင်း သွားရန် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြောင်း၊ “Magnet” တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း တုံ့ ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့ရကြောင်း ဖေ့ဘုတ်ကုမ္ပဏီက ပြောခဲ့သည်။
Mizzima News in Burmese
ဘယ်လိုပြောရမလဲ?... ဘီဂီးနီး Of Mobile ဟတ်ဝဲပေါ့ :D
All Updates Reader ( AUR ) ဗားရှင်းသစ် မကြာမီထွက်မည်.
Serviceသမားတွေအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိင်သော Rom များကို...
ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ ကဗျာလေးများ Fo...
မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် နဲ့ မမေးထားသောသူများအတ...
CCleaner v5.03.5128 Pro Full
Mi myanmar font
မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် အိမ်မှာနေရင်း (ဆိုင်မသ...
အချစ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့# ဒီပို့စ်က အချစ်ဆိုတာဘာလဲမသိသေးတ...
မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် ပိုက်ပိုက်မကုန်စေတဲ့ န...
Hardware Power ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်း
မှတ်ချက်။ ။ မေးမြန်းခြင်းသည်းခံပါ...။ ။
DisplayFusion Pro 7.2.0 (Beta 2) Full
ပထမဆုံးသော Battery ကိုတီထွင်သူ Alessandro Volta ရဲ...
MPPG ADB Toolkit
နာမည်ကြီး iRoot (ခ) vRoot 1.8.2.13135 New Version
ခါချနေရတယ် (၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း) Mp3
မေးထားတာများ ရပါပြီ ... အောက်တွင်ပါပါသည် .. ဖွင့်ဖ...
ဟုတ်တယ်လောက်တော့ လုပ်လိုက်...THT :P
ချစ်သူမရှိပေမဲ့ Valentine's Day မှာ အာလုံးအားလုံးေ...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် Cambridge Grammar in Use...
US ဒေါ်လာ ၃ သန်းခွဲတန် iPhone 6
နယူးဒေလီမြို့၌ Telenor ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုနိုင်
just the knowledge ပေါ့ ...
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ Performance ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးဖိ...
သင်တို့ မေးထားတာတွေ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်.. For...
ဘ၀ကို ဒသနဆန်ဆန် နေနိုင်ဖို့ သင်ဒါတွေဖတ်သင့်တယ် နော်..
Vivo y13 imei invalid error တက်နေသူများတွက် vivo f...
iRoot 1.8.1.12835 ( နာမည်ကြီး VRoot New Version 1....
The Trade Times Vol3No 146
Wi-fi Password ကြည်ရှုနိုင်သည့် Apps အသစ်ထက်ထွက်ပီ-...
ညစ်ညမ်းကား များအသွင် ယူထားသည့် Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ြ...
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူများ နှင့် Email ,SMS,Phone C...
သင့်ဘ၀အောင်မြင်ချင်သလား ဒါဆိုအောက်ကစာဖတ်ပြီး အောင်...
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူ များ(၀ါ)မေးမြန်းထားသူတွေအတွက...
Adobe Master Collection CS5 & CS6 Crack File သီးသန့်
C8816 Build B180 အတွက် S5 Custom ROM
Code တောင်းစရာမလိုတဲ့ Bootloader Unlock နည်း...